ज्योती लाईफ इन्स्योरेन्सकोे नाफा बढ्यो, कति छ प्रतिशेयर आम्दानी ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ज्योती लाईफ इन्स्योरेन्सकोे नाफा बढ्यो, कति छ प्रतिशेयर आम्दानी ?
ज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
विवरण अनुसार कम्पनीले १० करोड ७८ लाख रुपैंया बराबरको खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीको तुलनामा कम्पनिले ६ करोड ८९ लाख पैंंया बराबरको खुद नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको नाफा गत आवको सोही अवधीको तुलनामा ३ करोड ८९ लाख रुपैंया बराबरले बढी हो ।
कम्पनीकोे चालु आवको पुुसमसान्तसम्ममा कुल १ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख रुपैंया बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधीसम्म कम्पनीले ७५ करोड १३ लाख रुपैंया बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधीको तुलनामा कम्पनीको बीमा शुल्क संकलनमा ९२ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ताँ पुँजी १ अर्ब ५४ करोड रुपैंया बराबर रहेको छ भने जगेडा कोषमा ४८ करोड २४ लाख ७३ हजार रुपैया जम्मा रहेको छ । समीक्षा अवधीसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु १४ , प्रतिशेयर नेटवर्थ रु १३४.८१ र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु ३३९.९३ रहेको छ ।
यस्तै कम्पनीको चालु आवको पुस मसान्तसम्म दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जा ३ अर्ब ९१ करोड ६४ लाख रुपैंया बराबर रहेको छ । भने सोही अवधीसम्म अल्पकालिन लगानी तथा कर्जा २५ करोड ३३ लाख रुपैंया बराबर रहेको छ ।
कम्पनीको आम्दानी चालु आवको पुस मसान्तसम्म ४ करोड ९३ लाख ६४ हजार रुपैंयाले बढेर १४ करोड १ लाख १५ हजार रुपैंया बराबरको आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधीसम्म कम्पनीको आम्दानी ९ करोड ९ लाख ५१ हजार रुपैंया बराबर रहेको थियो ।